नेपाल किन पछि प¥यो ?
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउँदा पनि नेपालले काँचुली फेर्न नसक्नुको कारण के हो ? मित्रको यो प्रश्नमा मैले जबाफ दिए– असल ब्यक्तिहरुको मौनता र खराब ब्यक्तिहरुको आतंकका कारण नेपालले काँचुली फेर्न नसकेको हो । साधन स्रोतका कारणले नेपाल पछि परेको होइन । भ्रष्टचार नगर, भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर, पदीय मर्यादा र जनताप्रति जवाफदेही होऊ अनि देशको बिकास हुन्छ ।
म पनि यही नाराका साथ भ्रष्टाचार बिरुद्धको सहयात्री हुँ । तर हाम्रो कुरा पदीय अहंकार पालेकाहरुले बुझे पो । विरोध गरे पदै खोस्न आयो भन्ठानेर अरिंगाल लगाइदिने, छौंडा छाडिदिने गर्छन्, अनि कसरी विकास हुन्छ ?
अन्तमा दुई कुरा
१. कसैले पनि म धनवान, बुद्धिवान, शक्रिमान भनेर घमण्ड नगरे पनि हुन्छ । म सुन्दर अथवा सुन्दरी छु भनेर अहं नपाले पनि हुन्छ । जिन्दगी बुझ्नेहरुका लागि मुहार होइन, व्यवहार ठूलो कुरा हो । व्यवहार मानवीय हुनुपर्छ ।
२. कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुनसेनले चीनलाई खुशी पार्न मास्क नलगाउन उर्दी जारी गरेछन् । चीन कोरोना परास्त गर्न लागिपरेको छ । कम्बोडियाले विद्यार्थी पनि नफर्काउने भएछ । रोगको पक्षपाती होइन चीन । चीनलाई साथ दिने बेला हो यो, कोरोना भाइरसलाई साथ दिने बेला होइन ।